Chaw Su's Likes - Myanmar Network
Chaw Su's Likes
Back to Chaw Su's Page
Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြ… 9. In view of the fact that"In view of the fact that" သည် "Inasmuch as" နှင့် အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။10. Now that"Now that" သည် "cause and effect" ကြောင်း၊ ကျိုးပြစကားများကို informally ရိုးရိုးရှ… Discussion Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြ… 21 Likes
Recycle ဆိုသည်မှာ..။ တစ်ခါတုန်းက Chat Roll တစ်ခုမှာ နှင်းနုလွင်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း နဲ့ စကားပြောခဲ့ဖူးတယ်..။ မှတ်မှတ်ရရ အဲတုန်းက ပို့စ်အသစ်တင်စရာမရှိတာနဲ့ တောင်းပန်ပါရစေ ဆိုတဲ့ ပို့စ်အဟောင်းလေးကိုပဲ renewal သဘော ပြန်တင်ထားမ… Discussion Recycle ဆိုသည်မှာ..။ 69 Likes ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အားကေ… [Zawgyi]ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှာ အသုံးပြုဖို့ အားကောင်းတဲ့ ဝေါဟာရတွေ လေ့လာလိုတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရေးဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသူကို ကူညီရေးပေးဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အောက်မှာ ဖော်ပြထ… Discussion ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အားကေ… 153 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (In f… In fact (အမှန်အတိုင်းပြောရရင်) အမှန်အတိုင်းပြောရရင် (in fact) ကို တင်ပြထားသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခု၏မှန်ကန်မှုသည် မကြာသေးမီကပင် ဖော်ပြထားသော (သို့) အကြံပြုထားသော အကြောင်းအရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသောအခါတ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (In f… 50 Likes
လူငယ်နှင့် အချိန်အသုံးချမှု [Zawgyi] လူဘ၀သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ အကောင်းဆုံးတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာကတော့ လူငယ်လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ လူငယ်လို့ ပါးစပ်ကနေ အော်လိုက်ရရင်ကို တော်တော်လေး ခွန်အားတွေ ပြည့်လာသလိုပဲ။ လူငယ်ဆိုတဲ့… Discussion လူငယ်နှင့် အချိန်အသုံးချမှု 100 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Doub… There's no doubt about it (ယုံမှား သံသယဖြစ်စရာမရှိဘူး။) ယုံမှား သံသယဖြစ်စရာမရှိဘူး။ there’s no doubt about it ကို သေချာပေါက် မှန်ကန်နေသည်ဟု သိထားသော တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းကို မပြောခင် (သို့) ပြောပြီးသေ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Doub… 54 Likes